Shina SM-Superplasticizer Mpanamboatra sy mpamatsy | Divenland
Melamine Superplasticizer dia karazana rano malemy amin'ny anionic surfactant ary manana hery fanalefahana sy famafazana simenitra. Izy io dia iray amin'ireo superplasticizer efa misy tsara indrindra. Ny vovon-dronono miorina amin'ny melamine miorina amin'ny vinaingitra melamine dia miorina amin'ny famafazana vovo-dronono amin'ny endriny ary ny toetran'ny faritra voafaritra manokana, tsara ny fisian'ny vovobony maina, mora tohina hamandoana sy caking. ary fiatraikany tsara. Izy io dia manana fifandanjana tsara amin'ireo karazan-drano reducers hafa ary manitsy ny fahombiazan'ny reducers rano hafa miaraka amin'ny fiasa lehibe amin'ny taham-pahavitrihan'ny rano avo lenta, ny fanerena tsy an'habakabaka, tsy misy harafesina amin'ireo bara mihamafy izay misy ambany ny chloridion ary mahay mampifanaraka tsara amin'ny rehetra karazana simenitra.
Ny superplasticizer avo lenta mifototra amin'nyaminezy dia azo ampiasaina koa ho toy ny singa lehibe amin'ny fitaovana porofo amin'ny rano hampiakatra ny tsy fahatomombanan'ny mivaingana sy ny feta. Izy io dia azo ampiasaina ho ampahany amin'ny singa, miaraka amin'ny fitaovana hafa toy ny UEA mba hampifangaro ny rafitry ny beton-porofo manamarina tena.
Tahan'ny fampihenan'ny rano%
Ratio mampatanjaka mampitony% 1 andro
Shrinkage (28 andro)%
Fametahana ora eo amin'ny ora min. Voalohany
1) 25kgs / Bag (kitapo vita amin'ny plastika misy roa miaraka amin'ny lining PVC)
2) Ny vovony dia mora mandoto hamandoana ary tokony hotehirizina ao anaty kitapo voaisy sy napetraka ao amin'ny toerana maina.
3) Ny vokatra dia tsy misy poizina, tsy mora sosotra, tsy flammable. Aza mifandray amin'ny maso, vava ary hoditra. Ny fonon-tanana sy ny solomaso miaro dia ilaina ny ampiasaina. Raha sendra mifandray amin'ny hoditra ianao dia kobanina tsara amin'ny rano madio betsaka.
Manaraka: Polycarboxylate Superplasticizer
Polycarboxylate Superplasticizer miorina
Baseball Polycarboxylate Superplasticizer
Vovon-tsolika polycarboxylate Superplasticizer
Ny vidin'ny Polycarboxylate Superplasticizer
Polycarboxylate Superplasticizer Ranjono zava-pisotro